Ciidamada dowladda oo Lix ruux kala baxay Guryahooda Muqdisho+SAWIRO – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ciidamada dowladda oo Lix ruux kala baxay Guryahooda Muqdisho+SAWIRO
Ardaan Yare 9 January 2020
Ciidanka sida garaka ah u tababaran ee loo yaqaano Alpha Group ayaa xalay xaafadda Xamar Jadiid ee magalada Muqdisho kala baxay 3 gabdhood iyo 1 wiil kamid ahaa dadka ku nool Xaafadaas.
Ciidamada oo howlgal ku jirey ayaa waxaa ay sigaar ah u beegsadeen Guryo bartilmaameed u ahaa,waxana sidoo kale la sheegay inay kaxeysteen 4 Ruux oo dad da’ahaa,kuwaas oo la sheegay inay ka Ganacsan jireen Hilibka.
Sidoo kale intii ay Ciidamada howlgalka ku jireen waxaa ay xalay jabiyeen ilaa 2 guri oo isla xaafada Xamar Jadiid ku yaal,waxaana dadka deegaanka ay sheegeen in Ciidamadu ay wateen Gaadiidka Gaashaaman.
Mid kamid ah guryihii ay jabiyeen ayaa dadka degan waxaa ay sheegeen inay Ciidamadu ka cudurdaarteen, maadama ay sheegeen inay ku qaldameen,waxayna qoyska u balan qaadeen Lacagta dhismaha inay iyaga bixin doonaan.
Howlgalkaan ay ciidamada Dowladda ka sameeyeen Xaafado ka tirsan degmada Warta-Nabada ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli saacadihii la soo dhaafay muqdisho ay ka dhaceen qaraxyo iyo dilal.
Guddoomiye Waaxeed lagu diley Magaalada Muqdisho